မောပန်း အားကုန် အိပ်ရေးမဝ သွေးပေါင်ကျ ရုတ်တရတ် အားကုန် မူးဝေတာမျိုးဖြစ်လျှင် တစ်ခွက်ထဲနဲ့ သက်စာစေတဲ့ ရိုးရာဆေး – Suehninsi
ရုတ် တရက် အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူးဝေသလို၊ အိပ်ရေးမဝသလိုဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံး ကြည့်ပါနော်…. အားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါနော်….အလုပ်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊အားအင်ကုန်ခမ်းလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ
သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်လက် ကိုမျှဝေပေးပါ့မယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့..ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး၊ သုံပုရာသီးအမှည့်တစ်လုံး၊ သကြားဖြူဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း တို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။ သံပုရာအစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို
နှံ့နှံ့စပ်စပ်ရောမွှေပြီးသောက်ပေးရင်အမောအပန်းပြေပြီးအားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးနည်းကကျွန်တော့်ဖခင်ပေးတဲ့ရိုးရာဆေး တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် ။သွေးအားနည်းသူတွေနဲ့ သွေးပေါင်ကျသူတွေပိုပြီးသုံးစွဲသင့်ပါတယ် ။ အိပ်ရေးပျက်သူတွေအတွက်လည်းအားဆေးတစ်လက်ပါ။။ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…
ရုတျ တရကျ အားအငျကုနျခမျးသလိုဖွဈနပွေီး၊ မူးဝသေလို၊ အိပျရေးမဝသလိုဖွဈနရေငျ ဒီနညျးလေး စမျးသုံး ကွညျ့ပါနျော…. အားလုံးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျတာပါနျော….အလုပျပငျပနျးလို့ဖွဈဖွဈ၊အားအငျကုနျခမျးလို့ ဖွဈဖွဈ၊မူးဝနေရေငျပဲဖွဈဖွဈအလှယျတကူ
သကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့ဆေးနညျးတဈလကျ ကိုမြှဝပေေးပါ့မယျ။ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့..ကွကျဥအစိမျးတဈလုံး၊ သုံပုရာသီးအမှညျ့တဈလုံး၊ သကွားဖွူဟငျးစားဇှနျးနှဈဇှနျး တို့ကိုဖေါကျ ထညျ့ရောမှပေေးပါ။ သံပုရာအစတှေ့ကေိုဖယျရှားပဈပါ။ ပါဝငျပစ်စညျးအားလုံးကို
နှံ့နှံ့စပျစပျရောမှပွေီးသောကျပေးရငျအမောအပနျးပွပွေီးအားရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။ဒီဆေးနညျးကကြှနျတေျာ့ဖခငျပေးတဲ့ရိုးရာဆေး တဈလကျဖွဈပါတယျ ။သှေးအားနညျးသူတှနေဲ့ သှေးပေါငျကသြူတှပေိုပွီးသုံးစှဲသငျ့ပါတယျ ။ အိပျရေးပကျြသူတှအေတှကျလညျးအားဆေးတဈလကျပါ။။ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ…
အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ရင် ဘေးနားမှာ အရင်လိုမရှိနိုင်တော့တဲ့ မိခင်ကြီးကို သတိရတယ်ဆိုတဲ့ သန္တာဗိုလ်